Sanduuqa Gargaarka Degdega ah ee loogu Talagalay Shaqaalaha Hoteelada Seattle
Muddada codsiga waxay ku egtahay 15 ka Febaraayo, 2021
Caawimaada shaqaalaha hela mushaarka yar oo ka shaqeeya baararka, maqaayadaha, hoteelada, iyo albeergo
Magaalada Seattle waxay iskaashi la sameysay Wellspring Family Services (Laanta Adeegyada Qoyska ee Wellspring) si ay bixiso caawimaada lacageed ee halka mar ah si shaqaalaha shaqeeya looga caawiyo daboolida baahiyaha aasaasiga ah ee uu saameeyay dhibaatada COVID-19.
Sanduuqa Gargaarka Degdega ah ee Shaqaalaha Hoteelada Seattle waxaa loogu talagalay shaqaalaha hela mushaarka hoose, shaqaalaha ka shaqeeya oo kunool Seattle ee dhumiyay shaqooyinkooda ama la kulmay mushaar dhimis iyo ganacsiyada u xirmay arrimo la xariira aafada COVID-19.
Si looga soo baxo uqalmida dakhliga, xubnaha qoysasku waa inay sameeyaan 60% ama wax ka yar dakhliga dhexdhexaadka aagga (AMI) kaas oo ah:
Su'aalaha Badanaa La iswaydiiyo
1. Sidee ku oggaadaa inaan u qalmo Sanduuqa Gargaarka ee COVID-19 ee loogu Talagalay Shaqaalaha Hoteelada Seattle?
Waa in qofku ku noolyahay Seattle
Waa in uu yahay shaqaale ama shaqada ku waayay arrimo la xariira COVID ka Seattle
Waa in uu hadda ka shaqeeyaa ama kasoo shaqeeyay adeegyada shaqaalaha ee Seattle
Waa in uu kujiro ama ka hooseeyo 60% Aaga dakhliga dhexdhexaadka ah ee Seattle
2. Goorma ayay codsiyadu ku egyihiin?
Codsigu waxa uu xirmayaa Isniinta Febaraayo 15keeda, 2021 marka saacadu tahay 11:59 Habeenimo. Waa inaad soo gudbisaa codsigaaga waqti kasta inta lagu jiro muddadaan. Codsiyada lasoo gudbiyo kadib waqtigii loogu talagalay lama aqbali doono.
3. Qof kasta oo codsada ma heli doonaa caawimaad dhaqaale?
Maadaama uu dakhligu yar yahay, ma awoodno inaan qof kasta u adeegno. Waxaa laga yabaa qaar kamid ah codsiyada u qalma inaysan helin caawimaad dhaqaale.
4. Xubnaha qoyskayga ama aniga miyay tahay inaan ka walwalno lacagaha cayrta ah?
Sida ku xusan U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS, Adeegyada Muwaadinimada iyo Socdaalka Maraykanka), gunnooyinka “gargaarka dhibaatooyinka”, sida barnaamijkaan, looma tixgelin doono go’aaminta haddii uu shaqsigu u qalmo lacag dawladeed iyo in kale. Sidoo kale arrintaan waxaad ka akhrin kartaa USCIS Xaashida Xaqiiqooyinka ku aadan Lacagaha Cayrta ah si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Haddii aad su’aalo ka qabto xaaladaada soogalootinimada iyo/ama isticmaalida gunnooyinka, waa inaad la hadasho qareenka socdaalka ama wakiil ay aqonsan tahay DOJ.
5. Helida dakhligaan dhaqaale miyay saameyn ku yeelan kartaa xubnaha qoyskayga ama suurtagalnimada inaan noqdo muwaadin Maraykanka ah?
Haddii aad tahay qof haysta deganaansho sharci oo rasmi ah/kaarka caggaaran ee lagu sugo baasaboorka, helitaanka caawimaada dhaqaale ee Seattle COVID-19 Sanduuqa Gargaarka Shaqaalaha saamayn kuma yeelanayso awoodda aad u leeyahay inaad noqoto muwaadin Maraykan ah. Sidoo kale wax saameyn ah kuma yeelanayso xubnaha qoyska ee haysta deganaanshaha sharciga oo rasmi ah/kaarka caggaaran ee lagu sugo baasaboorka inay noqdaan muwaadiniin Maraykan ah. Haddii aad su’aalo ka qabto xaaladaada soogalootinimada iyo/ama isticmaalida gunnooyinka, waa inaad la hadasho qareenka socdaalka ama wakiil ay aqonsan tahay DOJ.
6. Macluumaadka aan ku qoro codsiga ma yihiin kuwo qarsoodi ah oo aan cidna lala wadaageen?
Laanta Adeegyada Qoyska ee Wellspring waxay masuul ka tahay aruurinta macluumaadka shaqsiyadeed ee aad sida ikhtiyaarka ah ugu soo gudbisay codsiga oonleenka ah ee Sanduuqa Gargaarka Shaqaalaha COVID-19 ee Seattle. Si aad nooga caawiso isticmaalida oggolaansho la’aanta ah, ilaali saxnaanta xogta, hubina isticmaalka saxda ah ee macluumaadka, Laanta Adeegyada Qoyska ee Wellspring waxay dejisay hannaan ku habboon si loo ilaaliyo loona sugo macluumaadka ay aruuriyaan. Si ikhtiyaar ah xogtaada ulama wadaagto laamaha dawlada, oo ay kujirtoc Magaalada Seattle.
7. Ma haysto kumbuyuutar ama ma heli karo interneet. Majiraan qaabab kale oo aan ku codsan karo?
Waxaan awoodnaa inaan codsiga ku bixino hab oonleenka ah oo kaliya.
8. Tani ma lacag la bixinaayo hal marbaa?
Codsadayaasha u qalma waxay kaliya awoodaan inay helaan lacag bixin hal mar ah.
9. Sidee u helaa lacagta la bixinaayo waqti imisa la'eg ayayse qaadanaysaa?
Wellspring waxay qiyaasaysaa in lacagta jeegaga la bixiyo Maayo 1deeda laakiin way ka sokomari kartaa.
10. Waxaan ahay lamaane, aniga iyo xaaskayga/ninkayga labadeenaba waxaan u qalanaa helida lacagta. Labadeenaba ma inaan codsanaa?
11. Xubnaha qoyskayga waxay ka kooban yihiin dhowr qoys. Sidee ayaan u codsanaynaa?
Qoys kasta waa inuu soo gudbiyo codsi la xariira qoyskaas.
12. Xubnaha qoyskayga waxay ka kooban yihiin dhowr qof oo waawayn oo aan lahayn reer. Sidee ayaan u codsanaynaa?
Qof kasta oo wayn waa inuu soo gudbiyo codsi u gaar ah.
13. Ma codsan karaa aniga oo matalaaya carruurtayda da'doodu ka yar tahay 18 sano?
Haa. Carruurta waa inay qayb ka yihiin codsigaaga, haddii aad u qalanto, sida ku xusan shuruudaha lagu xusay Su’aalaha #1.
14. Hadda ma haysta guri aan si joogto ah ugu noolaado. Miyay tahay inaan codsado, sidee ku heli karaa caawimaada dhaqaale haddii aanan haysan ciwaan boosto.
Shaqsiyaadka u qalma ee aan haysan guri ay si joogto ah u degan yihiin wali waa inay codsadaan. Wellspring waxay diyaar u tahay inay kugu hagto sida ugu habboon ee aad ku heli lahayd caawimaadaan dhaqaale ee kaashka ah. Fadlan arrintaan ku qor codsigaaga si aan sida ugu habboon kuugu adeegno.
15. Maxaa dhacaaya haddii xubnaha qoyskayga ay labo jeer si qalad ah usoo gudbiyaan codsiga? Natiijadu ma waxay noqonaysaa in nagala noqdo uqalmitaanka?
Haddii xubnaha qoyskaaga ay si qalad ah usoo gudbiyaan codsi dhowr jeer, Laanta Adeegyada Wellspring waxay awoodi doontaa inay oggaato in hal qoys ay soo gudbiyeen dhowr codsi waxayna dib u eegis ku sameyn doonta codsiga leh baahiyaha muhiimka ah. Sidoo kale waxaa laga yabaa inay taleefoon ama fariin qoraal ah kula soo xariiraan codsadaha haddii ay oggaadaan ciladaha codsiga.